Abiy Ahmed oo guulo ka sheegtay dagaalka Gobalka Tigreega – Idil News
Abiy Ahmed oo guulo ka sheegtay dagaalka Gobalka Tigreega
Ra’iisul Wasaaraha Itoobiya, Abiy Axmed ayaa wacad ku maray in uu sii wadi doono howlgalka militeri ee ka dhanka ah gobolka Tigreega inkasta ay jiraan baaqyo caalami ah oo ku aadan ilaalinta amniga.
Maamulka Abiy wuxuu ku eedeeyay xisbiga TPLF ee ka taliyo gobolka Tigreega in uu wado weerar ka dhan ah militariga dowladda.
Xiisad ayaa ka taagan gobolka Tigreega kaddib markii Ra’iisul wasaaraha uu ku dhawaaqay tallaabo militeri oo ka dhan ah maamulkaas.
Khudbad uu teleefishinka ka jeediyay Abiy, wuxuu ku sheegay in lagu guuleystay in howlgal militeri lagu qaado gobolka Tigreega isla markaana uu sii wadi doono howlgalkaas.
Dowladda federaalka ayaa horraan xaalad deg deg ah ugu soo rogtay gobolka Tigreega, waxaana la xiray duulimaadyadii aadi jiray gobolkaas.
Bayaanka uu soo saaray Rai’sul wasaaraha ayaa waxaa uu ku yiri “in khadka cas laga tallaabay” islamarkana si dadka iyo dalka loo badbaadiyo uu khiyaarka ugu dambeeyo noqday in awood loo adeeegsado,” TPLF.
TPLF waxay dhankooda sheegeen in ‘aysan is dhiibin doonin oo aysan iska indha tiri doonin halista weyn’
Dowladda federaalka waxay dhankeeda sheegtay in ‘colaadda ay wadaan kooxo yar oo dana gaar ah wata si ay u carqaladeeyaan amniga dalka’
TPLF ayaa horey waxay ugu eedeeyeen maamulka Abiy in uu marmarsiiyo ka dhiganayo feyraska Corona si uu awoodda u sii hayo maadama waqtigiisu ku ekaa bisha October.
Maxaa ka socda gobolka Tigray?
Girmay Gebru, oo ah wariyaha BBC-da laanteeda ku hadasha afka Tigray-ga ayaa soo tabisay in aroornimadii Arbacada dhawaqa rasaasta laga maqlayay gudaha magaalo madaxda gobolka Tigray ee Mekelle, laakiin markii dambe xasiloonida ayaa dib usoo noqotay.
Isu socodka dadka lugeynaya ayaa hadda caadi ugu soo laabtay magaalada, laakiin gaadiidka dadweynaha ayaa shaqada joojiyay maadaama maamulka ay soo rogeen xayiraado adag oo dhinaca dhaqdhaqaaqa ah.
Waxaa sidoo kale la xiray hawada gobolka, sida ay wararku sheegayaan.
Waxaa xiran dhammaan bangiyada iyo xafiiska kaliya ee ay halkaas ku leedahay shirkadda telefoonnada ee ay dowladda maamusho ee lagu magacaabo Ethio Telecom – taasoo sidoo kale ah shirkadda kaliya ee adeegga telefoonnada ka bixisa dalka Itoobiya.
Shirkadda diyaaradaha qaranka ee Ethiopian Airlines ayaa joojisay duullimaadyadii ay ku tageysay gobolkaas.
Ma cadda sida dowladda federaalka ay u dhaqan galin doonto xaaladda deg-degga ah ee lagu soo rogay Itoobiya, maadaama gobolkaas ay gacanta ku hayaan hoggaamiyeyaashiisa, sida ay wariyaheenna sheegtay.
Waxay intaas ku dartay in ciidamada Tigray-ga lagu daadiyay xadka uu gobolkaas la wadaago gobolka Amxaara.